Home » blog » Jụọ onwe gị na ị bara uru?
Onye ọ bụla na-agwa gị na e nwere ngwa ngwa ma ọ bụ ọrụ ebube ga-eme ka ị nweta ihe dị mkpa karịa mgbalị ọ bụla na-agha ụgha.
Ị nụrụ nke ahụ? Ha na-agha ụgha.
Eziokwu bụ, ọ dịghị ezigbo ngwọta ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ebube mgbe ọ na-abịa n'ibu arọ. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ ị nwere ike ịgbakwunye na ụlọ gị: Ezi nri. Ngwa ngwa. Ihe mgbakwunye. Mmiri. Ihe ndị a niile ga-enyere gị aka, ma ọ dịghị otu n'ime ha bụ ọrụ ebube ma ọ bụ ngwa ngwa. Eziokwu bụ, ọ bụ naanị otu isi ihe na-eme ka ị ghara ịdị arọ ma debe ya. Naanị otu ngwá ọrụ ị ghaghị inwe iji nweta ahụ ike. A pụghị ịzụta ya. Ọ naghị abịa n'ụdị ọgwụ. Ị pụghị inweta ya na onye ọhụụ. Eziokwu bụ, ị nwere ya, ugbu a, ka ị na-agụ nke a.
Ọ dị n'etiti ntị gị.
Ụbụrụ gị. Naanị ihe na-egbochi gị ịnwụ ọnwụ nke ọma na ụzọ ndụ siri ike bụ uche gị. Ọ bụ ihe na-agwa gị na ị bụ n'ezie mkpa enyemaka nke abụọ nke poteto na-emepụta ihe. Ọ bụ ihe na-agwa gị na ike gwụrụ gị nke ukwuu ịpụ n'ihe ndina na mmega ahụ. Ọ bụ ihe na-agwa gị na ị ga-ada ada.
Ma, ụbụrụ gị bụkwa ihe ga-agwa gị na I nwere ike ime ya, na ị ghaghị iri cupcake ahụ, nke ga-agwa gị na I nwere ike ịrịgo arịgo elu. Ụbụrụ gị ga-agwakwa gị na i ruru eru ... ma ọ bụrụ na ị zụọ ụbụrụ gị iji kwe ka okwu onwe onye dị mma. A na-enweta nkwụsị ọnwụ ma ọ bụrụ na ị kwe ka uche gị mara na ị ruru eru inwe obi ụtọ ma dị mma. Ụbụrụ gị bụ azịza ọrụ ebube maka oke mgbagha gị.
Ya mere, jụọ onwe gị, sị: Ị bara uru?